Ọkachamara Semalt na-enye Nzọụkwụ 10-Ntuziaka Nye E-Ịzụ ahịa Ahịa
SEO na ahia ahia di n'otu. Otú ọ dị, mgbe e mere atụmatụ ma mee ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị,ọdịnaya nwere ike imelite arụmọrụ dị mma. Ya mere, olee otu ị ga - esi jikọta ihe ndị SEO chọrọ na ihe ndị e kere eke?
Gaa na iwu iri ndị a, nke Artem Abgarian nyere, bụ Senior Customer Success Manager nke Ọkachamara Ọrụ Digitial.
1. Chọpụta ihe ndị ahịa na-elekọta - slot animal cartoon.
Ndị ahịa na-aga nke ọma na-anabata ngwa ahịa ahịa iji chọpụta ndị ahịa ha 'mkpa. Ụzọ ọzọ na-efu na ngwa ngwa nke iwepụta ihe ndị dị mkpa nke ndị ahịa chọrọ iji mee ihe bụ iji SEO nnyocha nyocha. Iji mezuo nke a, họrọiji zaa ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ engines ọchụchọ ma na-agba ndị ọrụ nyocha ọnụ maka inwekwu echiche.
2. Họrọ ụdị ọdịnaya dị mma.
Mgbe e dere banyere isiokwu nke ndị nyocha na-achọpụta na ọnụ ọgụgụ buru ibu, ogologo ogeọdịnaya nwere ike ịdị mma. Tụkwasị na nke a, a ga-edepụta ọdịnaya dị otú a n'asụsụ ndị ọbịa na-ejikarị eme ihe. Otu n'ime ụzọ kacha mma ị ga-esi amataụdị kachasị mma bụ site n'ịṅa ntị na isiokwu ndị dị na Google.
3. Cheta itinye ederede nkọwa.
Ọ bụ ezie na engines ọchụchọ nwere ikike nke na-agbanwe mgbe nile, ha ka chọrọederede ihe edere iji nyere ha aka ịghọta ihe omuma, onodu, na ihe oyiyi n'ime vidio. Kpee ihe omuma ihe mgbe nile ma gunyetranscripts nwere isi ihe ịchọrọ ime.
4. Echefula ihe ị na-ere.
Jikọọ na echiche ọdịnaya nke dabara na ọrụ na ngwaahịa ị na-enye.Ọ nwere ike ịpụta echiche doro anya. Otú ọ dị, ndị nyocha na-enwe mmasị mgbe nile n'ọtụtụ njirimara, ozi, na ngwaahịa. Ya mere,zere imepụta ọdịnaya n'èzí ozi metụtara ngwaahịa gị..
5. Edela maka njikwa.
Dee maka ndị na-ege ntị. Ọ gwụla, ndị na-ekiri ha na-eji otu SEO okwu dị ka azụmahịa, okporo mmiri najargon ma mepụta ọdịnaya pụrụ iche site na iji asụsụ akọwa na nke dị larịị. Ma, na-ezo aka na isiokwu ndị ahụ, ị ​​mere nchọpụta na mbụ mgbe ị na-ekpebina ọdịnaya gị.
6. Cheta ire ahia.
Ndị ahịa ahia na-achọ ka ndị ahịa na-ala na saịtị ha mgbe ọ bụla ha na-achọ maka ọdịnaya dị n'ime ya rafuo gị. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ọ bụ ọdịnaya dị iche iche karịa ngwaahịa na ụdị. N'ọnọdụ dị otú ahụ, onye na-ere ákwàkwesịrị igosi otu esi elekọta ma ọ bụ jiri ihe, nke a nwere ike ịrata ndị ọbịa ịzụta ngwaahịa.
7. Njikọ e-azụmahịa na ọdịnaya.
Njikọ bụ ụzọ dị mkpa maka ndị na-ege ntị iji nweta ma jupụta ọdịnaya. Ọzọkwa,ọ na-enyere engines ịchọpụta iji ghọta akụkụ dị iche iche nke saịtị. Jiri ntụgharị isi na igodo ụkwụ na njikọkọ ozi yanaọdịnaya ka ndị ọbịa wee nwee ike inweta ozi na ngwaahịa dị mfe.
8. Gwa ọdịnaya na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọ ọdịnaya gị, tinye ya n'otu saịtị ahụ ị na-eji na-ere ngwaahịama ọ bụghị microsite. Microsites abaghị uru na nchogharị nyocha ọhaneze ebe ọ bụ njikọ na mpụga.
9. Tụlee ihe gbasara ịlụ syndicating.
ọdịnaya dị na saịtị gị agaghị adọta ndị ọbịa nke ọma. N'ọnọdụ dị otú ahụ,ndị ahịa ahịa e-ahia kwesịrị itinye ọdịnaya. A na-eme ya site na ịnye ọdịnaya gaa na saịtị ndị ọzọ nke na-eme ka ọdịnaya ndị dị na ntanetị gị pụta.
10. Kpachara anya mgbe ị na-ebipụta ọdịnaya ọdịnaya.
Ịkwusa isiokwu site na isi iyi ọzọ nwere ike iyi ihe ngwọta mara mma mgbe ịenweghị ego iji mepụta ọdịnaya nke aka gị. Ka o sina dị, site na SEO anya, usoro ihe a dị njọ na e-azụmahịa. Ọ na-enyere mmadụ akaọzọ ịkwado site n'ịkwado ọdịnaya ha na saịtị gị.